Mairi Pamwe Chete - Potatoes News
Tora kudzika kwakadzika mune yazvino indasitiri nzwisiso mune yedu chaiyo E-zine! Kukuchengeta iwe uchizivana neakanyanya kukosha mutengi maitiro, kubva parizvino ehupfumi maonero kusvika kune nyowani kuvandudza uye kuvhura kubvira yapfuura kota. Panguva ino, tarisa zvimwe zvezvinyorwa zvinoratidzwa pazasi!
Maitikiro emakota anoona kuwedzera kwese kwemari pakushandisa, magazini inotora zvakadzama muzvikamu kuti unzwisise mikana nematambudziko akasangana nevashandisi izvo zvinobatsira kutungamira bhizinesi rako nzira kuenda kumberi.
Isu tinoratidzira kudikanwa kwevashandisi kuti vanzwisise chaizvo kukosha kwekushandira vatengi vavo pamatafura maviri; panzvimbo uye kumba, zvichikupa kunzwisiswa kwehunhu hwevatengi uye zvichikubvumidza iwe kujairana nenzira nyowani dzekushanda.
Chef wedu, Paul, arikupfura BBQ yake mukota uye achaita kuti unyure pamusoro pe 'Lo N Slow' kubika. Akagadzirawo cheats Boston bhinzi kuti akupe imwe inokurudzira yekufemera yekufemerwa uye uwane iwo hunyanzvi kuyerera mukicheni!
Slice nePizza Mapilgrim uye US-yakavakirwa cheni kuvhura muUK… Zvakanaka isu hatidi kupa zvese kure! Tinya apa kuti uwane yakazara scoop pane iwo ekuona!
Tags: E-zineMcCainMcCain Chikafu
ChiSweden Kutanga Inotangisa Yenyika Yekutanga Mbatatisi-yakavakirwa Kudyara Mukaka
Indigenous-owned, Manitoba-based Potato Chips Brand Inowedzera Munyika Yose Canada
NYC Yekudyara Inoisa Guinness World Rekodhi Yemazhinji Anodhura French maFry
Tikiti yepasi rese yekutengesa yakatangwa ye #PotatoEurope 2021
REMA yakagadzira 48 Volt yakazara inotungamirwa nemagetsi mbatatari haulm puller / mudzi wemidzi
Kutanga kurima mbatatisi 2021 zvakabudirira